Inona no atao hoe hakiviana? | Inona no Lazain’ny Baiboly?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Inona no atao hoe hakiviana?
“Sahiran-tsaina aho ka mitanondrika tanteraka, ary mandehandeha amin’alahelo foana.”—Salamo 38:6.
IZAY LAZAIN’NY MPITSABO
Indraindray isika mba kivy ihany nefa misy koa hakiviana efa lasa aretina mihitsy. Lasa tsy mahavita zavatra firy ny olona voan’izy io, ary mikorontana hatramin’ny fiainany. Ahoana anefa no ahafantarana raha efa lasa aretina ilay izy? Na ny manam-pahaizana aza tsy tena mitovy hevitra amin’io. Ny azo lazaina fotsiny dia hoe malahelo be foana ilay olona, sady mahatsapa ho meloka sy tsy misy dikany.
Be dia be ny lehilahy sy vehivavy tantarain’ny Baiboly hoe nalahelo be. I Hana, ohatra, “ory dia ory”, izany hoe “torotoro fo” na “kivy be.” (1 Samoela 1:10) Nisy fotoana koa i Elia mpaminany namoy fo, ka nangataka tamin’i Jehovah Andriamanitra mihitsy mba ho faty.—1 Mpanjaka 19:4.
Nampirisihina koa ny Kristianina voalohany mba “hanao teny mampahery ny kivy.” (1 Tesalonianina 5:14) Araka ny boky iray, ilay “kivy” voalaza eo dia “izay olona rera-tsaina satria mandalo zava-tsarotra.” Efa tratran’ny hakiviana koa àry ny mpanompon’Andriamanitra fahiny.
Diso ve ianao raha kivy be foana?
“Mbola miara-mitoloko sy miara-mijaly foana ny zavaboary rehetra.” —Romanina 8:22.
Ny fahadisoan’i Adama sy Eva no nahatonga ny aretina, anisan’izany ny hakiviana. Hoy ny Salamo 51:5: “Efa nanam-pahadisoana aho rehefa nateraky ny reniko tao anatin’ny fanaintainana. Ary efa mpanota aho raha vao niforona tao an-kibon-dreniko.” Milaza koa ny Romanina 5:12 hoe: “Tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray [Adama] ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.” Nandova ota avy tamin’i Adama isika rehetra ka mety harary, na ny vatantsika izany na ny saintsika na ny fontsika. Izay no antony ilazan’ny Romanina 8:22 hoe: “Mbola miara-mitoloko sy miara-mijaly foana ny zavaboary rehetra.” Mampanantena zavatra tsy ho vitan’ny dokotera mihitsy koa anefa Andriamanitra. Hovany hahafinaritra be ny fiainana eto an-tany ka tsy hisy intsony ny aretina, anisan’izany ny hakiviana.—Apokalypsy 21:4.
“Akaiky an’izay torotoro fo i Jehovah, ary mamonjy an’izay ketraka.” —Salamo 34:18.
Misy zavatra tsy azonao anoarana indraindray. (Mpitoriteny 9:11, 12) Afaka mitady hevitra anefa ianao, mba tsy hahatonga anao halahelo be loatra rehefa misy olana.
Mila dokotera ny olona marary. (Lioka 5:31) Raha efa tsy hakiviana tsotra fotsiny àry no mahazo anao, dia aza misalasala manatona dokotera. Tena ilaina koa ny mivavaka. Milaza, ohatra, ny Salamo 55:22 hoe: “Apetraho amin’i Jehovah izay manavesatra anao, fa izy no hanohana anao. Tsy havelany hangozohozo mihitsy ny olo-marina.” Tsy zavatra atao handaminana saina fotsiny anefa ny vavaka, fa tena resaka ataonao amin’i Jehovah Andriamanitra. Sady izy “akaiky an’izay torotoro fo.”—Salamo 34:18.
Tsara koa raha resahinao amin’ny namana tena atokisanao izay tsapanao. (Ohabolana 17:17) Hoy ny Vavolombelon’i Jehovah iray, atao hoe Daniela: “Tsy tiako lazaina amin’olona mihitsy ny alaheloko. Nisy Vavolombelona iray izay anefa nampirisika ahy hiresaka an’ilay izy. Soa ihany aho fa niresaka taminy satria izany mihitsy kay no nilaiko. Maivamaivana erỳ aho taorian’izay.”
Hizara Hizara Hakiviana